Warar Goosgoos ah: Ruunkinet 16/12/2009
Laba ruux oo lagu gowracay Muqdisho
Laba dhalin yaro oo Soomaali ayaa meydadkooda laga helay agagaarka saldhiga degmada Yaaqshiid ee gobalka Banaadir saaka.
Labada la dilay, ayay dadku sheegayaan in la bireeyay islamarkaasina ay saaka dadku ku soo kaceen dadkan oo yaalla meel isku dhow oo agagaarka Yaaqshiid, kuwaas oo aan la ogeyn cidda birreysay.
Mid ka mid ah dadka Yaaqshiid ku sugan, ayaa sheegay in dhacdadaani ay si aad ah uga naxeen dadka deegaanka, islamarkaasina aanay dadku aheyn kuwa deegaanka degan laakiin ay la muuqato kuwa meelo kale lagu soo dilay misena meydadkooda halkaa la soo dhigay.
Kooxda Xisbul Islaam oo maamusha meesha la soo dhigey meydadkan, ayaanan wali ka hadlin dhacdadaasi xanuunka badan.
Dadka la dilay ayaa da'aadooda u dhaxeysay 40 illaa iyo 20 jiro.
Sweden oo lacag ugu deeqday dadkii ku dhaawacmay qaraxii Shaamo
Dowladda Sweden, ayaa lacago ugu deeqday dadkii ku waxyeelloobay weerarkii argagixisnimo ee 3dii bishan ka dhacay Muqdisho kaas oo lagu dilay dad aad u farabadan oo Soomaali ah.
Xafiiska wasiirka hormarinta iyo iskaashiga caalamiga ee Sweden, ayaa shaaciyay in ay 1.4 Milyan oo doollar ee Mareykanka ugu talageen dhaawacyadii ku waxyeelloobay qaraxii Shaamo ee horaantii Diseembar.
Xukuumadda Sweden, ayaa sheegtay inay ka xuntahay weerarka lagu dilay wsiiro, dhaqaatiir, ardey, waalidiin iyo suxufiyiin, kaas oo nin isa soo miidaamiyay isku qarxiyay xarun xaflad qalin jabineed ay ku socotay.
Soomaali lagu helay hub oo Kenya lagu maxkamadeynaayo
Maxkamad ku taal dalka Kenya ayaa waxa la keenaya 7 ruux oo lix kamid ah ay Soomaali yihiin kuwaas oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah u heysteen hub, kaas oo laga helay markab ay la socdeen.
Markabka oo ku soo xirtay mid ka mid ah dekadaha Kenya, ayaa sarkaal booliska ka tirsan oo magaciisa diiday in la carabbaabo, waxa uu sheegay in hubka ay qabteen shalay uu ku jiray laba baasuuke iyo rasaas kale.
Sarkaalka, ayaa sheegay in shaqaalahan markab calanka dalka Seraliyoon ka dul babanaayay aanay bolisku la socodsiin inay hub sitaan ka hor inta aanay dekadda ku soo xiran, taas oo ah sharci la doonaayo buu yiri inay ku dhaqmaan doonyaha iyo marakaabiita ku soo xirta dekadaha Kenya.
Dadkan Soomaalida ah, ayaa waxa maxkamadeyntooda maanta ay imaaneysaa xilli sidoo kale sagaal kale oo Soomaali ah ay ku jiraan xabsi ku yaalla Kenya kuwaas oo lagu qabtay hub ay si sharci darro ah u wateen gudaha magaalada Mombaasa.
AMISOM oo lacago loogu deeqay
Guddiga Midowga Afrika ayaa taladaadii sheegay in deeq bixiyayaasha caalamiga ah ay howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ugu yabooheen lacago kale 80 milyan oo doollar ah si ay u sii xoojiyaan howlgalkaas
Kullan uu hogaaminaayay guddomiyha midowga Afrika ee nabadda iyo amaanka danjire Ramtane Lamamra oo ka dhacya Addisa Ababa, ayaa waxa ka soo qeyb galay wasiirada gaashaandhiga dalal ka tirsan midowga Afrika, kuwaas oo ka wada hadlay arrimaha ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya.
Wasiirada gaashaandhiga dalalka Burundi iyo Yuganda, ayaa kulanka ka qeyb galay iyadoo sidoo kale wasaaradda amaanka qaranka Soomaaliyana ay kulanka goob joog ka aheyd.
QM, Jaamacadda Carabta, Midoga Yurub, IGAD, xubnaha joogtada ah ee golaha amaanka QM, Itoobiya, Libya., iyo Jabuuti ayaa kulankaasi ka qeyb qaatay.
Kulanka ayaa ugu yeeray waddamadii hore ugu yaboohay sidoo kale AMISOM iyo dowladda Soomaaliya deeqda lagaceed ee 204 Milyan oo doollar gaareysa shirkii Barasles inay si deg deg ah u bixiyaan lacagaha ay ballan qaadeen.